May Nyane: ကမ္ဘာပျက်မယ်လား.. (ဖွဟဲ့.. လွဲစေ.. ဖယ်စေ..)
သိပ်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာမို့ ခပ်မြန်မြန် ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ် ဖတ်ပြီးတော့ ထပ်မန့်မယ်ပေါ့ဗျာ...း)
ဆရာမရဲ့ အိပ်မက်တွေက တကယ်များ ဖြစ်လာမှာလားဗျာ..!
ဆရာမကြုံခဲ့သလို အိပ်မက်ထဲက နေရာတွေ တကယ်ကြီး ပြန်မရောက်ဖူးပေမယ့်.. “သလိုလို” တွေတော့ ခံစားဖူးတယ်..။
ကမ္ဘာပျက်တာမျိုးကြီးကိုတော့ မမက်ရဲသေးဘူး.. တိုက်အမြင့်ကြီးပေါ်က လိမ့်ကျလို့ လေဟာနယ်ထဲ လွှင့်နေတာမျိုး မက်မိလို့ လန့်နိုးရင်တောင် ပြန်အိပ်ရမှာ ခပ်ကြောက်ကြောက်.. တကယ်များသာဆိုရင်..။
ဒေါ်အိန္ဒြာ ဒုက္ခပေးလို့ ထိုင်ရမလို ထရမလို ဘုန်းကြီးပဲ ဝတ်လိုက်ရင်ကောင်းမလိုလို ကို ဖြစ်လို့..။
ဆရာမရေ “တကယ်သာ ကမ္ဘာပျက်ရင် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အသက်ရှင်ကျန် မနေဖို့ ဆုတောင်းရမှာပဲ”
ကျနော်ကတော့ “မပျက်ပါဘူး” ဆိုတဲ့ဘက်က မရဲတရဲ လောင်းကြေးထပ်ထားတယ်..း)
မကြီးရေ ကျနော့်ကို ခြောက်ပါနဲ့နော့်။ အဲ့ဒီအိပ်မက်လေး အကောင်းအထည် မပေါ်ပါစေနဲ့
တကယ်တော့ လူဆိုတာ သေမျိုးကြီးပါပဲ တချိန်ချိန်တော့ သွားကြရမှာပဲနော့် ကြောက်တော့ပါဘူးး)
ဆရာမရဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်မက်က တကယ်လားဆရာမ။ အိပ်မက်မှန်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများ ရှိတယ်။ ဒါကိုကျွန်မ ယုံတယ်။ ကျွန်မက ကမ္ဘာတနေ့ပျက်မယ် ဆိုတာ ယုံပေမယ့် အခုလောက် အစောကြီး ပျက်လိမ့်မယ်လို့တော့ မယုံတဲ့ဘက်ကပါတယ်။ ဆရာမ အိပ်မက်သာ မှန်ရင် ၂၀၁၂ ခုမှာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာာပျက်တော့မယ်လို့ ယုံရတော့မယ် ထင်တယ်။
အိပ်မက်ကတော့ တကယ်ပါ..။ ဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ တိဝူးလေ..။ ဒါမဲ့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီကိစ္စကြီးက အချိန်မရွေးဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ..။
အိပ်မက်က တကယ်ပါ (မနောက်ပါဘူး။ ဟိုတုန်းကတည်းက အမနဲ့ ခင်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများ သိကြပါတယ်..။ အရင်က မကြောက်ဘူး။ ဟီးး ခုမှ ကြောက်စရာ ကောင်းလာတာ..။) ပြီးတော့ ဘုရားဟောအတိုင်း မမြဲတဲ့ တရားတွေအရရော.. ဘာမှ မခိုင်မာဘဲ လေဟာနယ်ထဲ ရှိနေရတဲ့ ကြယ်ကြီးတွေ အချိန်မရွေးကြွေကျသွားနိုင်တာကို တသက်လုံး မြင်ဖူးနေခဲ့ကြတာပဲနော်..။ တို့ကမ္ဘာလည်း အဲလို အချိန်မရွေး ကြွေကျ မသွားနိုင်ဘူးလား..။
အမကတော့ ယုံတာ မယုံတာထက် ဖြစ်မယ်ဆို ဖြစ်နိုင်တာပဲလို့တော့ တွေးမိတယ်။ (ပြီးတော့ နော်ဝေဘက်မှာ မြေအောက်မြို့တောင် တည်နေပြီဆိုပဲ):(
အောင်မယ်လေး... အစ်မရယ်. အိပ်မက်တွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကလည်း ကြက်သီးထစရာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလို အင်တာနက်ကျေးဇူးနဲ့ ချစ်ခင်ရတဲ့ မောင်နှမတွေ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံဆည်းခဲ့ရတာကိုက ဖြေသိမ့်စရာပါလေ။ (ဒါတောင် တချို့က မိုက်မိုက်မဲမဲနဲ့ ဂျီတော့ခ် မ၀င်တော့ဘူး ဘာညာနဲ့ အဆက်ဖြတ်ချင်သေးတယ်နော်။ ဆိုးလိုက်တာ။ :P )
ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်ပါ။ နောင်ဘ၀ကို ရောက်သွားခဲ့ရင်လည်း “မြေကမ္ဘာ အလွမ်းပြေ” ဆိုပြီး စီးရီးစ်လိုက် စာတွေရေးပါဦးနော်။
Ko Gyi Jeff said...
မထိတ်သာမလန့်သာ! အိမ်ထောင်မကျသေးလို့မသေပါရစေနဲ့အုန်း ...
အဲ..အဲ. တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုလဲ တယောက်ထဲပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဒီမှာ ငယ်ငယ်နုနုလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်မှ ဘ၀ စတယ်ဆိုတဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားကိုတောင် မရောက်သေးဘူးခင်ဗျ။ ဖွဟဲ့… ဆရာမရဲ့ နောက်ဆုံးအိပ်မက်လည်း လွဲပါစေ။
ဒါထက် ကျနော့်မှာလည်း ထပ်ဖန်တလဲလဲ မက်တတ်တဲ့ အိပ်မက် သုံးခုရှိတယ်။ ကျနော့်အဖို့တော့ ဆရာမအိပ်မက်ထက်တောင် ပိုလို့ ခြောက်ချားစရာ ကောင်းသေးတယ်ခင်ဗျ။ အိပ်ယာက နိုးလာရင် ဇောချွေးတွေ ပြန်နေတတ်တယ်။ အဲဒီ အိပ်မက် သုံးခုစလုံးကို ဒီအရွယ်အထိ ထပ်ဖန်တလဲလဲ မက်လို့ကောင်းတုန်း။
(၁) စာမေးပွဲက မနက်ဖြန် ဖြေရတော့မှာဆိုရင် ဒီနေ့အထိ ကျောင်းစာ (လက်ချာနုတ်စ်တွေ) မစုံလင်လို့၊ စာတွေ လုံးလုံးမကြည့်ရသေးလို့ ယောက်ယက်ခတ်နေတဲ့ အိပ်မက်။
(၂) စာမေးပွဲမှာ ဖြေရမယ့်ဘာသာရပ်ကို မှားကြည့်လာပြီး စာမေးပွဲခန်းထဲရောက်မှ တခြားဘာသာရပ်အတွက် မေးခွန်းဖြစ်နေတာကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ ဇောချွေးပြန်နေတဲ့ အိပ်မက်။
(၃) အလုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ မြန်မာပြည် ပြန်သွားပြီး ကာလအတိုင်းအတာ တခုအထိ မေ့မေ့လျော့လျော့ အလုပ်မလုပ်ဘဲ ဇိမ်နဲ့ ထိုင်စားနေတယ်။ ကုန်သလောက်ရှိမှ ဟာ…. ငါစင်္ကာပူက စီပီအက်ဖ်(စုဆောင်းငွေတွေ) မထုတ်ခဲ့ရသေးပါလား…. ဆိုတာ သတိရပြီး စင်္ကာပူသွားပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ အိပ်မက်။
အိပ်မက်တွေက ဆရာမလို အနာဂတ်ကို မှန်းမျှော်ပြီး မက်တာ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ ငယ်ငယ်က စာမကြိုးစားခဲ့လို့၊ အခုလောလောဆယ်မှာလည်း အလုပ်ကို မကြိုးစားလို့ မသိစိတ်က ဒဏ်တပ်တဲ့အနေနဲ့ မက်တာဖြစ်မယ်။း-)
ရေချိူးကန်ထဲစိမ်နေရင်းနဲ့ကမ္ဘာပျက်တဲ့ ၂၀၁၂ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်လိုက်မမ..
အိမ်မက်ထည်းကနဲ့ တူနေရင်နောက်မမက်တော့ဘူး ဟိဟိ...ဒါငါ့အိမ်မက်ထည်းကလိုပဲဆိုပီးတော့..
မမ အိမ်မက်ထည်းမှာအားလုံးမသေဘူးပေါ့ မမကျန်နေသေးတယ်လား..
အဲဒါအဆိုးဆုံးပဲ ..ရေမျှော ငတ်ပြတ်ပြီးမှသေကြရမှာလေ ....တစ်ခါတည်းသေလိုက်ခြင်တယ်အမြန်ဆုံး ...
အရင်ကတော့ သိပ်မယုံတတ်တဲ့ဘက်ကပဲ ...ဒါပေမယ့် ဆရာမစာလေးဖတ်ပြီး သဘာဝဘေးကတော့ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ထင်နေမိတယ် :P
ဆရာမကတော့ မြင်မက်တဲ့သူဆိုတော့ လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ကံနည်းသူ တစိတ်တဒေသထဲမှာ ပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေမိတယ်။
အသည်း တယားယားပါလား ဆရာမရယ်
အိပ်မက်ကို ဘလော့ပေါ်တောင် ချရေးလိုက်ပီဆိုမှတော့ ကြိမ်းကျေသွားလောက်ပါပီ .. (ဒီလိုပဲ ကြံဖန် တွေးရတာ :P)
ကမ္ဘာပျက်တာ ကြုံရတာလဲ ကုသိုလ်တစ်မျိုးပေါ့
(ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဖြေတွေးနေတားP )
ကမ္ဘာတော့မပျက်ဖူးသေးဘူး အိပ်မက်ထဲမှာ ..း)
ဒွတ်ခပဲ.. ခုမှသူများက အချစ်နဲ့စတွေ့ပြီး ဘ၀ကြီးတယ်နေပျော်ပါလား တွေးနေတုံးရှိသေးးးး ဆရာမရေ
မြန်မြန်ချေပါ။ ရေချိုးကန်ထဲ ရေနဲနဲထဲ့ပြီး မှောက်ခုန်၄၅မိနစ်လောက်နေရေထဲမှာလေဘာတီရုပ်ထုအ
သေးနဲ့ တခြားတိုလီမုတ်စ အရုပ်လေးတွေချိုးဖဲ့ထဲ့၊၊ ဘေးနံရံမှာအမိုးလုံးနဲ့ အဆောက်အဦးပုံတခုကပ်။
ကမ္ဘာကြီးပျက်နေပြီဗျို့လို့ ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး ၅မိနစ်တခါလောက်အော်ပေး။
ဆရာမးး((( ခုပဲ ၂၀၀၉ကုန်တော့မယ်..ဘုရား..ဘုရား .......လုပ်ပါဗျ မြန်မြန်..
ဆရာမရေ မန့်ရတာ စာလုံးက
ဘာလဲတော့ မသိဘူး ဆရာမရယ် ကျမလည်း အိမ်မက်တခုကို ခဏခဏ မက်တတ်ပြီး အပြင်မှာလည်း အဲ့အတိုင်း ဖြစ်ဖြစ်နေတတ်တယ်။
တခါတလေ တကယ်ဖြစ်ချင်တာများ မက်ပါတော့လားလို့တောင် ဆုတောင်းမိတယ်။
၂၀၁၂ မှာကမ္ဘာမပျက်ရင် ဒီဇင်ဘာ၂၂ရက်နေ့ အိမ်ဖြူတော်မှာ ဆုံကြမယ် မမ...းP
ကိုပေါ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ပြီး ဟားလိုက်ရတာ။
ကိုပေါလိုပဲ အိပ်မက် ၁) နဲ့ ၂) ကို ခဏခဏ ပြန်မက်တယ်။ ၃) တော့ မမက်လာသေးဘူး။
အစ်မကို ယတြာချေခိုင်းနေကြတာလဲ ရီရတယ်။
(အဲလို ပြောလို့ သတ္တိကောင်းတယ် လို့တော့ မထင်ပါနဲ့)
အစ်မရဲ့ အိပ်မက်တွေအကြောင်းကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။ အဲလိုမျိုး မဖြစ်ဖူးတော့လေ။ မက်ရင်လဲ ဟိုရောက် ဒီရောက် ခဏပဲ။ အစီအစဉ်တကျလဲ မက်လေ့မရှိဘူး။
သိပ် guilty ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တချိန်ကတော့ အဲဒါကိုပဲ version အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆင်တူယိုးမှားတွေ ခဏခဏ မက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါလဲ ကိုပေါပြောသလို မသိစိတ်က ဒဏ်ခတ်တာနေမယ်။
ဖတ်ပြီးမှ သိပ်မယုံရာကနေ.. ကြောက်သလိုလိုဖြစ်လာပြီ...။
"တို့ကမ္ဘာလည်း အဲလို အချိန်မရွေး ကြွေကျ မသွားနိုင်ဘူးလား" တဲ့ ။ ကယ်ကြပါ။
ဒီတခါ post မှာ comment တွေ ဖတ်ရတာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ..။ ခုမှ နည်းနည်း စိတ်အေးတယ်.. တကယ်ပြောတာ..။
နောင်ဘ၀မှာ ရှင့်အမက အတိတ်ဘ၀ကို သတိရနိုင်မယ့် ပါရမီရှင်လို့ ထင်သပေါ့လေ..။ တကယ်လို့ သတိမရနိုင်ခဲ့ရင်တော့ သတိလာပေးလှဲ့ဦး :)
ဲJeff ရေ.. စိတ်မပူနဲ့သား တယောက်တည်းဆိုတော့ လှည့်ကြည့်စရာမလိုဘူး.. ခြေဦးတည့်ရာသာ ပြေး။ ပြေးရင်းလွှားရင်း ကောင်မလေးတောင် တွေ့နိုင်သေး :P
ကိုပေါ.. အဲဒီအိပ်မက်မျိုးတော့ ကျမလည်း မက်သဗျ.. ခုထိပဲ.. ဥပမာ အိပ်မက်ထဲမှာ အသံလွှင့်ခန်းထဲ ၀င်ရတော့မယ်.. ပြောစရာ အစီစဉ်စာရွက်တွေ ပျောက်နေတာ.. သတင်းစာရွက်တွေ ရှာမရတာ.. ဇောချွေးတွေပျံရော.. အဲလိုလေ..။ ဟိဟိ။
ဒါမဲ့ နိမိတ်ပြအိပ်မက်ကတော့ တပုံစံတည်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ မက်တာ.. ကျမရဲ့ နောက်ဆုံး အိပ်မက်လိုပေါ့.. ခိခိခိ။
ရေထဲ မှောက်ခုံကြီးဆိုတော့ အောက်ပိုင်းက ပိုချမ်းမှာထင်တယ်နော် :P
အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့.. တခါတည်းပဲ သေလိုက်ချင်တယ်လို့။ အဲလိုကြီးထဲမှာတော့ ရှင်ကျန်မနေချင်ပါဘူးကွယ်..နော။
တယောက်တည်းတော့ မငြိမ်းချမ်းချင်ပါဘူး သမီးရယ်..။ တူတူပဲ သေချင်တယ်။
ကျိန်းပဲ ကျေမလား..။ နိမိတ်ပြသလိုပဲ ဖြစ်မလား.. ပြောတတ်တော့ပါဝူးး ဟူးဟူး
အမလေးတော် ဒါမျိုးကြီးတော့ ကြုံဖူးချင်ပါဘူး.. ကြောက်တတ်ရတဲ့အထဲ..။ :(
အဲလို အိပ်မက်အတိုင်း ပြန်ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေ အမလည်း အများကြီးတွေ့ဖူးတယ် သိလား..။ အင်း အမခမျာတော့ အဲဒီအိပ်မက်ကို တကယ်လန့်နေတာ အမှန်ပါ..။ ခု သတိရရင်ကို ကြက်သီးထတယ်..။ အဲဒီည.. လကြီးကလည်း သာနေသေးတာတော့်.. သိလား။
ဟုတ်တယ်နော်.. အဲလို လုပ်မှထင်ပါရဲ့..။
လစ်ဘာတီရုပ်နဲ့ လွှတ်တော် ရုပ်တုတွေ ရှာဝယ်ဦးမှပါ..။ ဟီဟိ (သဘောကျတယ်.. အဲဒီအကြံ)ဒါမဲ့ ၄၅မိနစ်ကတော့ များလွန်းသအေ.. တော်ကြာ ကမ္ဘာပျက်လို့ မသေ.. အအေးပတ်လို့ သေပါ့မယ်.. ကတည်း.. :P
ဟုတ်ပါ့.. တခါတည်း ကောင်းတဲ့ အိပ်မက်များတော့ တကယ်မဖြစ်..။ ပြောချင်ဝူး..။
စတုန်းက စပြီး.. ဘာခုမှကြောက်ပါဘီလဲ.. ဒီက မပြောချင်လို့ ငြိမ်နေတာကို.. :P
ဟုတ်တယ်ဗျ.. ကိုပေါရဲ့ အိပ်မက် ၁ နဲ့ ၂ ကို လူတော်တော်များများ မက်ဖူးကြတယ်.. စိတ်ဆရာဝန်တွေပြောတာတော့ stress ရှိနေရင် အဲလို မက်တယ် ပြောတာပဲ..။ အမအိပ်မက်မျိုးကတော့ မက်လေ့ရှိတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးတယ်... ဒါပေမဲ့ နည်းတယ်...။ စိတ်ညစ်စရာကြီးပါ ညီမရယ်..
လုပ်တော့မယ်..ဆရာမ က အိမ်မက်ထဲမှာ အသက်တော့ကြီးနေပြီ ဆိုတော့ သိပ်မပူပါဘူး..
jeff ၇ယ်..မင်းကစွံမှာ သေချာရဲ့လား..ဆိုင်ကယ်ဖိုး
ဆရာမ ညီမ ကိုမေးကြည့်..သူက 2012 expert. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲက လေ့လာနေတာ..
အခုတောင် ဘယ်ကိုရွေ့ရင် လွတ်မယ်လို့ပြောနေတယ်.
LA က Basin ထဲမှာ နော်..:))
ကျနော်လည်း နေရာတနေရာရောက်ရင် ငါဒီနေရာရောက်ဖူးတယ် အခြေအနေတခုဆိုလည်းငါဖြစ်ဖူးသလို လို့ထင်မိတာနောက် အိမ်မက်မက်ဖူးတာဖြစ်ဖြစ်နေတယ်
သူများတွေလည်း မပြောဖြစ်တော့ဘူး.ဟိုတနေ့က နေလည်ဖက်ကြီး ကိုယ်စီးလာတဲ့ကားကိုနောက်က၀င်တိုက်တာ ကားထဲမှာညှပ်ပြီးသေတော့ သေတော့မယ်လှုပ်လို့ကလဲမရ ရဲတွေ သူနာပြုကားတွေကလည်းမလာနဲ့ မမေငြိမ်းရယ် လန့်နိုးလာတယ် နောက်နေမှသိရတာက အဲ့ဒီနေ့ကကျနော်တို့မြို့မှာ တနေ့လုံးကားတွေတိုက်လိုက်တာ စံချိန်အမြင့်ဆုံးပဲတဲ့
ဘာမှန်းလဲမသိဘူး စိတ်ထဲလည်းမစွဲပဲနဲ့ မမေငြိမ်လိုရေ
ပေါ်မျှောတာတော့ မမက်ဘူးသေးဘူးဗျာ.မက်လာဦးမလားမသိဘူး...ကျနော်တွေးကြည့်တာတော့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရေတွေများလာရင် အဲ့ဒီရေတွေက ကမ္ဘာတောင်ဖက်ခြမ်းကနေ အစက်ဖြစ်ပြီး စင်္ကြာဝဠာထဲ ပြုတ်ကျသွားမလားလို့.ဟီး..အဲ့ဒါဆိုအကုန်တော့မသေဘူး.ထင်တယ်.တကယ်တော့လည်းကြောက်သာကြောက်နေရတာ သေမင်းက ကိုနောက်နားလေး ခုတောင်ရောက်ချင်ရောက်နေမှာဗျာ..သေခါနီးကိုယ်ကပြူးတူးပြဲတဲဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မျာသူများတွေလည်း ကိုယ့်လိုဖြစ်နေမှာကို မကူနိုင်တာကလည်း ဖြစ်နေကျ ၀မ်းနည်းစရာလိုပဲ ဖြစ်ဦးမှာ။
အိပ်မက်တွေ အပြင်မှာ တကယ် ဖြစ်လာတာ ထူးဆန်းတယ်နော်... ဆရာမရဲ့ တတိယအိပ်မက်တော့???
၀တ္ထု တပိုဒ်ရေးပါ ဆရာမ အဲ့ဒီ အိပ်မက်တွေကနေ အပြင်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ အကြောင်းတွေပေါ့...
ဆရာမရေ ကျွန်တော်ကတော့ နေကြတ်ချိန်လေး အားရအောင် ခံစားကြည့်ပြီးမှ..
တို့ကမ္ဘာလည်း အဲလို အချိန်မရွေး ကြွေကျ မသွားနိုင်ဘူးလား...။
ဆရာမ စာရေးကောင်းလွန်းလို့ အခု နဲနဲတောင် ကြောက်ချင်လာပြီ... :D
အိပ်မက်တွေက နမိတ်ပုံတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူများတွေ ယုံ မယုံတော့ မသိ... ကိုယ်တိုင်ကတော့ တကယ်ယုံမိတယ်။ အိပ်မက်တွေဟာ ကိုယ့်အတွက်လဲ အလွန်မှန်ကန်တဲ့... ပြီးတော့ သိပ်သိမ်မွေ့တဲ့ နမိတ်ပုံတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်...
ဆရာမရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အခုလို ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါ...။
ဆရာမရဲ့ အိမ်မက်ထဲရောက်လာပြီး မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ မပြောနိုင်တော့ဘူး။ ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတာပဲလေ။ အခုလည်း ကမ္ဘာကြီးဟာ တခုပြီးတခု ပျက်စီးနေတာပဲ။ အားလုံးပျက်မသွားတာပဲ ရှိသေးတာ။ ဆရာမ ရေးသလို တကယ်သာပျက်ရင်တော့ သေတတ်အောင် လေ့ကျင့်ရမလိုပဲနော်။ နေတတ်ဖို့ထက် သေတတ်ဖို့က အရေးကြီးတာကိုး။ ဒီတဂ့်ပိုစ့်လေးကို ဒဏ္ဍာရီ လိုက်ဖတ်နေတာ စာရေးသူ တစ်ယောက်ချင်းစီက မှတ်သားစရာလေးတွေကို စုပြီး မှတ်သားသွားပါတယ်နော်။
ကြောက်တော့ ကြောက်သား ဆရာမရေ ...
ဆရာမရေ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုပါရစေ..လာလည်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ် ပညာရှင်တစ်ဦးရေးထားတဲ့ အာဘော်ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး ဆရာမ ..
မ ရယ်… ဒီက ကြောက်တတ်ပါတယ်ဆို… သက်ဝေတက်ဂ်ထားတာ ကြောက်စရာမကောင်းတဲ့ဘက်က လှည့်ရေးမလို့ စဉ်းစားနေတာ… မ ရေးထားတာ ကြက်သီးတောင်ထတယ်… ဒါပေမယ့် မ က အိပ်မက်ထဲမှာ အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတော့ ထင်သလောက်တော့ မဆိုးဘူးနော်… စကားမစပ် ကြည်နူးစရာလေးတခု တက်ဂ်ထားတယ် မ ရေ…
အခုမှ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိတယ်။ ဆရာမက ချိုသင်းတို့ကို သတ္တိခဲ အောက်မေ့လို့ ခြောက်နေတာလား။ ချိုသင်းက မကောင်းတာဆို မကြားချင်၊ မဖြစ်ချင် တဲ့ စိတ္တဇ ရှိသူမို့ ညီမ အိန္ဒြာ tag ထားတာတောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာပါ ဆရာမရဲ့။ တရားကျစရာကောင်းပုံများ တွေးရမှာတောင် လန့်ပါတယ်။ မြီ..မြီ..မြီ.. လိပ်ပြာ ပြန်ခေါ်နေတာ.. :D
ဆရာမ အိပ်မက်တော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ ချိုသင်းက အိပ်ပြီဆို တချိုးတည်းမို့ ဘာအိပ်မက်မှ မမှတ်မိဘူးတော့..။
ဒါနဲ့ ဘာမှ မဆီမဆိုင် ကိုနေလင်းက ချိုသင်းတို့နေတဲ့ LA ကို basin ကြီးလို့ ပြောသွားပါလား။ ငါ နင့်ကို တတ်မယ်၊ အသေတတ်မယ် သိရဲ့လား။
နောက်ပြောင်ပြီးရေးထားတဲ. ပို.စ်လို.သာယူဆပါကြောင်း......အတည်ရေးတာဆိုရင်တော. ခင်ဗျားတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီ...ဒေါ်မေငြိမ်းရေ.